by MFSD Admin 1 | Dec 14, 2018 | မီးလောင်မှု, သတင်း
(၁၄. ၁၂. ၂၀၁၈)ရက်နေ့၊ ၀၂း၀၀ အချိန်ခန့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးခရိုင်၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ ပြည်ကြီးပျော်ဘွယ်အနောက်ရပ်ကွက်၊ ၃၅လမ်းနှင့် (၈၇×၈၈)လမ်းကြားတွင် (၉၀×၄၅×၃၀)ပေ ဂိုဒေါင်မှမီးစတင်လောင်ကြောင်း ၀၂း၂၀ အချိန်သတင်းရရှိသဖြင့် မန္တလေးတိုင်းအတွင်းရှိ...
by MFSD Admin 1 | Dec 12, 2018 | ထူးခြားဖြစ်စဉ်, ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေး, သတင်း
(၁၁.၁၂.၂၀၁၈)ရက်နေ့၊ ၁၄ ၂၀ အချိန်တွင်၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ မြိတ်ခရိုင်၊ မြိတ်မြို့၊ မြိတ်တောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ အေးချမ်းသာယာရပ်ကွက်တွင် လေယာဉ်ကွင်းမှ ဂေါက်ကွင်းလမ်းဆုံဘက်သို့မောင်းနှင်လာသော Toyota Town Ace (အဖြူရောင်) ယာဉ်သည်အရှိန်မထိန်းနိုင်ဘဲ...
ရှမ်းပြည်နယ်၊ မူဆယ်ခရိုင်၊ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်၊ နောင်ဆွေကျေးရွာတွင် မော်တော်ယာဉ်တိမ်းမှောက်မှုဖြစ်
by MFSD Admin 1 | Dec 12, 2018 | Uncategorized, ထူးခြားဖြစ်စဉ်, ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေး, သတင်း
(၁၁.၁၂.၂၀၁၈)ရက်နေ့၊ ၁၃ ၄၅ အချိန်တွင်၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ မူဆယ်ခရိုင်၊ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်၊ နောင်ဆွေကျေးရွာတွင် မန္တလေးမှ မူဆယ်သို့မောင်းနှင်လာသော Iveco(အဖြူရောင်)ဒီဇယ် (၇၂၀၀)ဂါလန်တင်ဆောင်လာသော (၂၂)ဘီးဆီဘောက်ဆာယာဉ်သည် အရှိန်မထိန်းနိုင်ဘဲ...